Jessica Barden Qaawan & Muuqaallada Muuqaalka Galmada - Diiwaanka Filimka Caanka Ah
Cajalado Jinsiga Caanka Ah
Jessica Barden Qaawan & Muuqaallada Muuqaalka Galmada
Waxaa jira isku soo wada duubJessica Barden qaawan iyo muuqaalo galmodhowr filim iyo taxane halka ay ka muuqatay! Iyadu waa 27 sano jir atariisho Ingiriis ah, caan ku ah 'Hanna', 'The New Romantic', 'Lambs Of God', iyo 'Jungleland', sidoo kale waxay ka mid tahay aktarada da 'yarta ah ee lagu arkay iyagoo qaawan filimada. Hoos kadhegayso fiidiyowyada, way fiicantahay!
Jessica Barden muuqaalo qaawan 'Penny Dreadful'
Hottie Jessica Barden muuqaal qaawan oo ka socda ‘ Penny Cabsi badan Waa halkan,halkaas oo aan ku arki karno gabadhan sexy ah oo ay qabteen oo ay jirdileen dad farabadan. Gabi ahaanba way qaawan tahay markii ninku qolka u keenayo, oo ay ka buuxaan dumar iyo rag. Waxay ku daawanayaan Jessica sida iyadu waa ugaadha! Markaasuu ninku dhirbaaxayaa wejiga Barden oo uu isku dayayaa inuu helo wax iyada ka laad laada. Markaasay haweeneydii istaagtay oo Barden indhaha ka daawanaysaa! Jessica quruxda badan waxay muujisay buugeeda iyo timo timo! Booqo inbadan wasmo qasab ah on Mostra Musa!
Kadib goobta lagu qasbay ee Jessica, waxaan haynaa laba muuqaal oo kale, halkaas oo Jessica Barden lagu arkay iyada iyo Billie Piper oo seddex geesood ah! Labadan nin baa dhiig ku daboolan, taabashada iyo dhunkashada midba midka kale. Barden waxay soo bandhigtay timaheeda yaryar waxayna xiiraysaa siilka markale!
Mid ka mid ah goobta seddax geesoodka ah ee Jessica Barden iyo Billie Piper halkan ayuu joogaa, markale waxay la joogaan isla ninkan. Waxay ku daboolan tahay rinjiga casaanka dhiig ahaan, seddexdan way taabanayaan Jessica way dhunkanaysaa Piper. Waxaan ahay geesi!
Jessica Barden oo qaawan & muuqaalo galmo 'Scarborough'
Fiiri fiidiyowga cusub eeJessica Barden muuqaal galmo qaawan oo ka timid 'Scarborough'. Muuqaalkii ugu horreeyay ee aan soo uruurinnay, waxaan ku arki karnaa naasaha oo farta lagu fiiqo iyo naaso yaryar oo qaawan iyadoo galmo qiiro leh la leh nin.
Kadibna waxaa jira midka labaad halkaasoo aktarada da 'yarta ah ee Jessica Barden loo arko inay tahay mid sare. Waxay iska qaadaysaa funaanaddeeda casaanka ah, iyadoo tusaysa naaso yar yar iyo ibta adag! Gabdho yar yar oo qurux badan, waxaan dhamaanteen rabnaa inaan dhadhamino! Ku raaxeyso dadweynow, xirfadda dhalaalaysa ayaa sugeysa jilibkan yar!
Waxaa jira muuqaalka saddexaad ee Jessica Barden oo ka socda ‘Scarborough’, halkaas oo ay ku soo bandhigtay boogo qaawan iyo ibta naasaha. Sidoo kale, waxaan leenahay dameerkeeda iyo timo timo shaashadda! Waxaan jeclaan lahaa in aan dhuuqo naasahan adag!
Jessica Barden boobs muuqaal ka 'Wanka Ilaah'
Jessica Barden oo ah atariisho da 'yar ayaa si weyn noo siisay aragti weyn oo ku saabsan Boobkeeda qaawan markale. Waxay xidhantahay maqaar iyo dhogor aan lahayn rajabeeto iyo shaadh toona, markaa baraheeda ayaa siibanaysa oo leh annaga haye! Ku raaxeyso dadweynow!
dawaco Megan qaawan gallery
nudes dheereeya Taylor xaday
ronda rousey xaday PIC